Enabling iPhone 3G iOS4 Multitasking on Mac | My Burmese Blog
Enabling iPhone 3G iOS4 Multitasking on Mac	On August 20, 2010	by Htoo Tay Zar	With	7 Comments	- iPad, iPhone	Apple က iOS 4.0 စထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ iPhone 3G, iPod Touch 2nd Gen အစောပိုင်းတွေမှာ Home Screen Wallpaper, Battery Percent, Multitasking တွေပေး မ run တော့ပါဘူး။ အမှန်တော့ iOS4က အဲဒီလို device အသစ်မကိုင်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် စက်လေးတာရယ် folder လေးပါလာတာရယ်ကလွဲရင် သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှု မရှိသလောက်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်လို JailBreak မလုပ်ချင်တဲ့သူတောင် Steve Job က အတင်းဖိအားပေးပြီး Multitasking ရဖို့ JB လုပ်ခိုင်းလာသလို ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လဲ JB လုပ်လိုက်တယ်။ နောက် စက်ကို အပေါ်ကပြောခဲ့တာတွေ Multitasking တွေရဖို့က ဖုန်းထဲက /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/N82AP.plist က .plist ဖိုင် တစ်ခုမှာ ပြင်ပေးရပါတယ်။ .plist ဆိုတာက xml လိုမျိုးဖိုင်ပါပဲ တစ်ခုရှိတာက Mac OS နဲ့ဖွင့်တဲ့ အခါ Mac OS က default plist editor ပါပြီးသားဖြစ်တာမို့ အဲဒါနဲ့ပဲတက်ပါတယ်။ တက်ရင် ဘယ်နားမှာ ပြင်ရမလဲ ဆိုတာ မသိတဲ့သူတွေ အတွက် နည်းပါ။ အဲဒီ plist မှာပဲ လိုချင်တဲ့ feature name ကို သေချာရိုက်ထည့်ပြီး value မှာ Boolean -> Check လုပ်ပေးသွားရုံပါပဲ။ အောက်မှာ ပြထားသလို ထပ်ထည့်သွားရုံပါ။
နောက် မြန်မာစာ ဇော်ဂျီဖောင့် အရင် ကိုစေတန် Cydia Installer လုပ်မပေးခင်က ထည့်ရင်လဲ အဲဒီနည်းနဲ့ font library ထဲက plist မှာ Modified Helvetica အပြင် Zawgyi-One.ttf ကို string နဲ့ ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အဲ တစ်ခုရှိတာက iPad မှာတော့ အဲဒီလို သွားပြီး system font ကိုမပြင်ပဲ အပိုဖောင့်ထည့်ရင် Boot မတက်ပဲ OS ပြန်တင်ရကိန်းရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုရဲမြတ်သူ iPad ကို တစ်ခါ ထည့်လိုက်တာ Boot မတက်တော့လို့ ပြန်တင်ရဘူးပါတယ်။ Apple က iPad မှာ iOS သုံးထားတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ဟာတွေ နဲနဲကွဲသွားပုံရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ .Plist edit လုပ်နည်း သိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… iPad, iPhone, Mobile	7 Comments	amk
JB မလုပ်ဘဲ နဲ့မြန်မာစာ install လုပ်လို့မရ ဘူးပေါ့နော် ကိုစေတန်ဟာတော့ JB နဲ့ သုံးဘူးတယ် restore လုပ်လိုက်တော့ JB မရှိတော့ဘူးဗျ CGFontCache.plist ကိုပြင်ဖို့ ကြိူးစားတာတော့ မအောင်မြင်ပါဘူး အစ်ကိုရေ
Like or Dislike:00	richardphyo
jailbreak မလုပ်ဘဲနဲ့ မြန်မာစာဖတ်ချင်ရင် App Store က iMyanmar ကုို Download ဆွဲပြီး install လုပ်လုိုက်ပါ။
@ Richard Phyo ~ iMyanmar/Browser is Myanmar font embedded Browser bro. Myanmar sar can only in that App. Coz Apple doesn’t allow any App to embedded font the whole system wide. Thanks
Like or Dislike:00	winhtoon
richardphyo i already in stall as u said it’s should be ok
Hi shwe nyi ko
I try to install myanmar keyboard for all pages like note pad myanmar search,is there any keyboard for i phone
mmkeyboard doesn’t work any pages.pls help me and others like me.want to try to read and search web without copy /paste and jailbreak.thank you guys.
so htu tay sar
u mean if I want to read and write burmese WE must jail break ? now virsion4.2.1jailbreak me.com cannot breaking ,need to down great to 4.0 I gotta doalot of dizzy steps so,what i can do without paying single penny?
Yes, It is you’ll have to jailbreak your iPhone. In order to read and write Burmese fonts on all apps system wide.